Manchester United Oo Suuqa Dhigtay Dean Henderson – Heemaal News Network
Manchester United Oo Suuqa Dhigtay Dean Henderson
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku wargelisay mid kamid ah xiddigaheeda mustaqbalka weyn leh, inuu u furan yahay albaabka bixitaanka ee Old Trafford, isla markaana uu xidh-xidho shandaddiisa.
Manchester United oo xilli ciyaareed adag ku jirta, isla markaana shaki la gelinayo mustaqbalka tababare Ole Gunnar Solskjaer, waxa ciyaartoyda bandhigga wanaagsan samaynaya ka mid ah goolhaye David de Gea oo booskiisa ka dhigtay mid aan gorgortayn geli karin, kaddib markii xilli ciyaareedkii hore uu Dean Henderson ku cidhiidhiyey booska ee mar kaydka loo diray.
24 jirka reer England oo xagaagii hore kasoo laabtay amaah uu ugu maqnaa Sheffield United ayay hadda Manchester United ku wargelisay inuu isku diyaariyo inuu ka baxo kooxda, iyadoo lagu dirayo 18 bilood oo amaah ah.
Laacibkan oo loo arko goolhayaha mustaqbalka ee Manchester United ayay kooxdu qorshaynaysaa in aanu kaydka ku dhimanin balse uu tago koox uu si joogto ah ugu ciyaaro, si uu khibraddiisa iyo tayadiisaba sare ugu qaado.
Bisha January ayaa la sheegay in kooxdu ay ku faraxsanaan lahayd haddii ay hesho koox uu Dean Henderson ka heli karo boos joogto ah oo uu amaah ku tago, laakiin gudaha horyaalka Premier League ah.
Wargeyska The Sun ayaa sheegay in madaxda United ay laacibkan la socodsiiyeen in uu isku diyaariyo bixitaan, waxayse u raaciyeen sida ay ugu arkaan in uu yahay goolhayaha mustaqbalka ee Old Trafford.
Buur Madow Oo Lagu Soo Dhaweeyey Magaalada Muqdisho